Farmaajo Archives - Ceelhuur Online
Home > Posts Tagged Farmaajo
Daawo Qalbidhagax: “Aniga oo Qaawan ayaa sawiro la iga qaaday kadibna itoobiya la ii dhiibay”
July 9, 2018 admin922
Halgame Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbidhagax oo dhawaan laga soo daayey xabsi ku yaala itoobiya, ayaa dad farabadan kula hadlay xaflad lagu maamuusayey soo dayntiisa. Munaasabadan oo ay ka qeybgaleen siyaasiyiin iyo qeybaha bulshada ayuu Qalbi dhagax ka jeediyey khudbo dheer oo uu kaga hadlay arimo badan. Cabdi kariin ayaa yiri :”Waxaa la iga qabtay Gaalkacayo, […]
July 8, 2018 July 8, 2018 admin576
Dhageyso: Qalbidhagax oo bixiyey wareysigii ugu horeeyey (Yaa itoobiya u dhiibay?)
July 3, 2018 admin499
Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi dhagax oo markii ugu horeysay wareysi bixiyey ayuu ka hadlay arimo, waxa uu sharaxay sida loo soo qabtay, iyo cidda ka dambeysay xarigiisa. Sidoo kale wuxuu u mahadceliyey ummadda Soomaaliyeed, oo garab istaagay markii Madaxda Sare ee Dowladda federaalka muwaadinkaan u dhiibeen cadowga itoobiya. halkaan ka dhageyso wareysiga oo xambaarsan xog […]
MD Farmaajo oo Qaabilay Wafdiga Jabuuti ee Kasoo Qeyb Galay Xuska1-da Luuliyo (Sawirro)
July 2, 2018 admin600
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Madaxtooyada Qaranka ku qaabilay wafdiga ka socday Jamhuuriyadda aan walaalaha nahay ee Jabuuti oo Muqdisho kaga qeyb galay xuska maalinta xorriyadda Gobollada Koonfureed iyo israacii Waqooyi iyo Koonfur ee 1-da Luuliyo. Madaxweynaha ayaa tilmaamay xiriirka soo jireenka ah ee ka dhaxeeya labada shacab ee walaalaha ah […]
October 4, 2017 October 4, 2017 admin490
Madaxweyne Farmaajo oo u hambalyeeyey Angela Merkel
September 25, 2017 September 25, 2017 admin468
Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed ayaa hambalyo u diray Ra’iisul Wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel taasoo markii Afraad ku guuleysatay doorashadda. War Kooban oo uu soo dhigay Twitterkiisa ayaa sidaan u qornaa: ” Hambalyo Angela Merkel , waxaana ugu hambeeyeynaya guushaada Markii Afraad doorashadda dalkaas, waxaana naga dhaxeeya dowladda Jarmalka wada shaqeyn wacan”. Hogaamiyaha […]
Musharax Farmaajo oo gaaray Muqdisho
December 20, 2016 admin452
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Somaliya iminkana ah Musharax Madaxweyne, ayaa goor dhaweyd soo gaaray magaalada Muqdisho, iyadoo uu ka soo degay garoonka Diyaaradaha Aadan Cabdulle Cismaan (Aadan Cadde). Farmaajo ayaa garoonka waxaa ku soo dhaweeyay qaar ka tirsan dadka ku howlan ololahiisa Musharaxnimada, iyadoo dadweyne kala duwan ay ku sugayeen Banaanka Garoonka Aadan Cadde. Gaadiid […]
Farmaajo oo ku wajahan Muqdisho
September 24, 2016 admin5054 Comments on Farmaajo oo ku wajahan Muqdisho
Ra’isilwasaarihii Hore ee Somalia Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo ahna musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee Somalia ayaa lagu wadaa in uu soo Gaaro Magaalada Muqdisho. Qaban qaabo balaaran oo lagu soo dhoweeynayo musharaxa ayaa laga dareemayaa magaalada Muqdisho ee caasimada Somalia. Mudane Farmaajo ayaa waxaa la aaminsanyahay in uu kamid yahay musharixiinta ugu cad […]